नेपाल प्रहरी अस्पतालको आईसीयूमा रोकिएन खुसीका आँसु– मरिसकेको मान्छे ब्यूँतिएर आएँ ! – नेपाली संगसार
नेपाल प्रहरी अस्पतालको आईसीयूमा रोकिएन खुसीका आँसु– मरिसकेको मान्छे ब्यूँतिएर आएँ !
नेपाली संगसार calendar_today ३ जेष्ठ २०७८, 12:45 pm
काठमाडौं । ‘यता आउनुस् न मलाई बोल्न मन छ। म पनि केही सन्देश दिन्छु,’ नेपाल प्रहरी अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत दूर्गा आचार्यले हामीलाई देख्ने बित्तिकै उत्साहित हुँदै बोलाइन्। ‘अक्सिजन सपोर्टमा हुनुहुन्छ, बोल्दा गाह्रो हुन्छ होला। हामी तपाईंको कुरुवासँग कुरा गर्छौं नि, हुन्छ?’ आईसीयूमा उपचाररत बिरामीलाई बोल्दा स्वास्थ्य अवस्था विग्रिन सक्ने भएकाले हामीले सम्झायौं।